Ezi zii-emoji ezintsha zango-2018 kwaye ezinye zinokhetho lokuzijikeleza | Iindaba zeGajethi
Asithandabuzi ukuba i-emoji izakuqhubeka nokuphucula kwiinguqulelo ezizayo kunye nohlaziyo njengoko kudala besenza, ngeli xesha into esinayo malunga nenyanga yingxelo esemthethwenikunye ne-emoji eya kufika ngo-2018 kwaye uluhlu lude kakhulu.
Ukongeza, inoveli ebalulekileyo kwezi emoji eza kufika kunyaka olandelayo kukuba sikwazi ukujikeleza ezinye zazo, ngale ndlela sinakho jolisa kwicala lezi zinto apho sifuna khona. Okwangoku kubonakala ngathi oku kuya kufumaneka kwizixhobo ze-iOS kwaye emva koko kuya kufikelela kwi-Android, kodwa kuya kuhlala kuqinisekisiwe ukuba baya kuyenza njani inyathelo kwaye ukuba izakufumaneka kwasekuqaleni.
Ngaphandle kwamathandabuzo ukuphuculwa kwe-Unicode 11 kuya kubonakala kwinguqulo elandelayo ye-iOS 12, kwaye eyona nto ikhuselekileyo kukuba emva koko baya kufikelela Izixhobo ze-Android. Kwelinye icala, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukusetyenziswa kwe-emoji kuphezulu kakhulu kwaye rhoqo sihlala sineendaba malunga noku, njengokongezwa kutshanje kwi-paella yethu ethandekayo okanye izinto ezinje. Oku kuboniswa kukusetyenziswa okuhle kwezi emojis kuzo zonke izixhobo ezikhoyo kwaye ngakumbi kwii-smartphones.
Uluhlu olupheleleyo lwe-emoji ibonakala apha kwaye kuyo sibona izinto ezintsha ezinomdla ezazifudula zikho kwaye zanyamalala ezifana neflegi yepirate, i-swan, i-skateboard eyenziwe ngomthi okanye ibhaskithi, kodwa ezinye ezininzi ezitsha njengendoda enempandla, umtshayelo, ikeyiki yenyanga okanye iintloko ezibomvu. Nangeyiphi ndlela ii-emoji ezikhoyo zininzi kwaye ngalo lonke ixesha kufuneka sikhangele enye iba ngumsebenzi odinisayo, enkosi ngokulungileyo sinodidi lwezona zisetyenzisiweyo kwaye ezinye iibhodi ezitshixwayo ngombhalo oqikelelayo uvumela indawo yawo ngendlela elula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ezi zii-emoji ezintsha zango-2018 kwaye ezinye zinokhetho lokuzijikeleza
Ishaja ye-Aukey eneziphumo ezi-2 ze-USB kunye neBhanki yamandla ene-USB C kunye namazibuko eMbane angama-20.000 mAh
Imbeko ye-Honor 10 / V10 kunye nexabiso eYurophu